Basa reDhijitari Midhiya Mukushambadzira | Martech Zone
Mugovera, December 28, 2013 Muvhuro, Zvita 30, 2013 Douglas Karr
Sezvo kushambadzira kunofamba kuenda kudigital, vatengesi vari kushanda kuti vaone iwo akagovaniswa akaenzana avo ekushambadzira mabhajeti. Izvo hazvisi zvekungosvika pazvinangwa zvavo zvese, zvakare kutora mukana kubhenefiti yeimwe neimwe svikiro kuti uone zvizere kushambadzira kwekudyara. Iyi infographic inoratidza yakakosha data data zvinhu pamwe nemaitiro anoshandiswa nevashambadzi kuti vaiwane rudyi.
Dhijitari midhiya iri kukurumidza kuve inodiwa nevatengesi. Na 2017, kushambadzira kwedhijitari kunofungidzirwa kuve kunokosha $ 171 Bhirioni, kuverengera kweinopfuura chikamu chechina chekushambadzira kwepasirese kushandisa. Izvi zvinomiririra 70% kuwedzera kubva mazuvano mazinga. MuUS, kushambadzira kunoshandisa paInternet zvakapfuura zvese midhiya kunze kwekutepfenyura terevhizheni muna 2011.
Capgemini Consulting yakaburitsa ebook nemhedzisiro, Basa reDhijitari muMedia Sanganisa: Kunzwisisa Dhijitari Kushambadzira uye Kuiwana Yakarurama.
Tags: capgeminicapgemini kubvunzadigital advertisingdigitaalinen kushambadza musanganiswadigitaalinen vezvenhaumidhiya musanganiswakushambadzira kwetsikazvetsika vezvenhau
Twitter: Autofollow zvichibva paNzvimbo